Xog buuxda: Qaabkee ayay u dhaceen weeraradii hoteellada Muqdisho + Shaqsiyaad caan ah oo |
Xog buuxda: Qaabkee ayay u dhaceen weeraradii hoteellada Muqdisho + Shaqsiyaad caan ah oo
Xiliga saacadda geeska Africa markii ay aheyd 06:15 Pm oo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho afka ku hayeen afurka ayaa mar qura waxaa la maqlay dhawaqa qarax xoogan oo ay xigeen rasaas la iswey daarsanayay.
Shacabka magaalada Muqdisho ayaa ku jahwareeray halka jugta culus iyo rasaasta ay ka dhaceysay, laakiin markii dambe ayaa laga warhelay in weerarka uu ahaa labo hotel oo ku yaala magaalada Muqdisho.
Hoteelada ayaa kala ahaa hotel Siyaad iyo Hotel Wehliye ee magaalada Muqdisho, waxaana tirade dadka ku dhintay hotelka Wehliye lagu sheegay inka badan 5 ruux oo rayid ahaa iyo dadkii weerarka geystay.
Weerarka hotel Wehliye ayaa ku bilowday qarax laga buuxiyay gaari oo lagu qarxiyay afaafka hore ee Hotelka, iyadoo kadib Alshabaab afaafka hore iyo dhinaca dambe ka galeen hotelka Wehliye ee magaalada Muqdisho.
Wararka qasaaraha Hotel Wehliye ayaa sheegaya inuu ku dhaawacmay milkiilaha hotelka iyo xildhibaano hore oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Muddo kooban ayuu socday weerarka hotel Wehliye ee magaalada Muqdisho, laakiin waxaa saacado qaatay weerarka ka dhacay hotel Siyaad oo ku yaala meel inka yar 15 Talaabo u jira madaxtooyada Soomaaliya.
Weerarkaasi ayaa la xaqiijiyay iney ku dhinteen 12 ruux oo dhinacyada weerarka soo qaaday iyo ilaalada hotelka kamid ahaa, waxaana laga baqayaa indhimahada intaasi kasii badato.
Markii uu dhacay weerarka hotel Siyaad ayaa waxaa suurto gashay in ciidamada nabad sugida Soomaaliya ay soo afjaraan weerarkaasi muddo saacado qaatay, waxaana Hotel Siyaad gaaray qasaaraha ugu badan ee weerarka marka loo eego Hotel Wehliye.
Wasiirada gaashaandhiga iyo amniga oo saxaafada kula hadlay goobaha weerarada ka dhaceen ayaa sheegay iney ku guuleysteen yareynta qasaaraha weerarada oo intaasi kasii badan lahaa.
Alshabaab ayaa sheegtay masuuliyada weerarada ka dhacay hotel Wehliye iyo Hotel Siyaad, waxayna sheegteen iney ku dileen saraakiil sar sare.
Dhanka kale xalay Alshabaab ayaa weerar duqeymo ah ku qaaday garoonka Stadium Muqdisho oo ay degen yihiin ciidamada AMISOM, lamina qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkaasi. order Brand Viagra online cheap, purchase zithromax.